Motivation for success :: कथा : बीस वर्षकी शर्मिला मिस र सोह्रको पुण्टे
कथा : बीस वर्षकी शर्मिला मिस र सोह्रको पुण्टे
प्रकाशित मिति : बुधबार, कार्तिक १७ २०७८
शर्मिला मिसले मलाई किन त्यसरी क्वारक्वारती हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन । शायद मेरो चोर नजरलाई उहाँले महसुस गर्नु भएको हो कि ! मलाई शर्मिला मिस किन किन साह्रै सेक्सी लाग्छ । मिस भएर मात्र हो, नत्र उहिल्यै प्रपोज गरिसक्थेँ ।
उहाँका गाजलु आँखा हेर्दा मलाई कितावमा पटक्कै ध्यान जाँदैन । बोइफैन्ड पनि छैन जस्तो छ । अरुलाई भन्दा मलाई क्लासमा बढी प्रेम र आदर पनि गर्नुहुन्छ । अस्तिको कक्षा परीक्षामा केही नलेखी खाली उत्तरपुस्तिका दिएर आउँदा पनि उहाँको विषयमा प्रथम भएछु ।
साथीहरु पनि मलाई अचेल ‘शर्मिला मिस’ भनेर बोलाउँछन् । उहाँकै कारण करिनाले गरेको प्रपोज पनि मैले नो भनेँ । के हो, के हो आजभोली म प्रेम रोगले थलिँदै गइरहेको छु । चालीस मिनेट कालोपाटीमा उहाँलाई ओछ्याएर हेर्दैमा ज्यानमा तन्दुरुस्ती आउने छाँट छैन ।
मलाई त एक क्लास होइन, सातै क्लास उहाँले लिनुभए हुन्छ जस्तो लाग्छ । अस्ति क्लासाँ मिस भिरुङगी भनेको के हो ? भनेर सोध्दा पूरै गुलाफतुल्य राता भएका गालालाई टिपेर खल्तीमा कोच्याऊँ जस्तो लाग्छ । सम्झिँदा खेरि पनि बिछट्टै आनन्द आउँछ । उहाँको ओठ देख्यो कि मेरो ओठमा कम्प छुट्छ ।
थाहा छैन, मलाई अचेल के भइरहेको छ । कहीँ मेरो आफ्नै मिससित प्रेम बसेको छ होइन ? मलाई आजभोलि थाहा हुँदै गएको छ कि, एचआइभि र भिरुङगी भनेको के हो भनेर ।
शर्मिला मिसले मेरा अरु साथी र मलाई गर्ने व्यवहारमा फूल र काँडाको फरक छ । अफिसको लाइब्रेरीमा मलाई एक्लै बोलाएर हिसाब सिकाउनु हुन्छ । त्यो किताबै किताबको संसारमा दुई टाउका कुनातिर लुकाएर खितखिताएको अस्ति हेडमास्टरले पनि देखेकै हो । जिस्किनु एकान्तमा उहाँ सितको मेरो दोस्रो क्लास हो ।
अस्ति जिस्केर चलाएको हात मिसको देब्रे छातीमा लाग्दा सिरिंगै भएछु । कुन अङ्गमा पर्यो कुन्नि रिसाएर हो या चोट लागेर भित्रैसम्म पसेथ्यो । लाजले झण्डै मरेको । उहाँ पनि झण्डै मर्नु भएकी । तर भित्रभित्र ज्यादै रोमाञ्चित भएको थिएँ । डर पनि लाग्यो, कहीँ शर्मिला मिसले हेडमास्टरलाई भन्नु भयो भने । तैपनि उहाँले यस विषयमा कसैसँग छुस्स प्रसंग पनि निकाल्नु भएन ।
के एउटा स्टुडेन्टले मिससँग प्रेम गर्नु हुँदैन ? डेटिङ गर्नु हुँदैन ? किस गर्नु हुँदैन ? के हो त्यो अपराध हो ? पहिला एसएलसी त सिध्याऊँ । शर्मिला मिसलाई म रातो गुलाफको फूल दिएर प्रपोज गर्छु । हामी बीच उमेरको फरक भएर के भो ? विवाह पनि उहाँसँग नै गर्छु । अनि सुहागरातमा प्रीतिको एउटै सिरक आधा आधा पनि उहाँसँग नै ओढछु ।
शर्मिला मिससिवाय मेरो जीवनमा अरु कसैको कल्पना नै छैन । महाकसम, त्यो कुहिनाले छुँदा गुलाफझैँ ढकमक्क फुलेको छातीलाई ओठैले टिप्छु । मेरो यो शर्मिला मिससित प्रेम बसेकै हो । जे परोस, परोस अब मौका मिल्यो भने म शर्मिला मिसलाई किताव साक्षी राखेर लाइब्रेरीमै किस गर्छु ।
कहाँ लेख्या छ र, स्टुडेन्तले आफ्ना मिसलाई किस गर्नु हुँदैन भनेर । त्यो नियम कहीँ छ भनेर त्यो म तोडिदिन्छु । हामी यति नजिकिसक्यौ अव बाँकी छ त त्यही एउटा बाँकी छ, अब म दुई ओठको दुई इन्चको दुरी चाँडै मेट्न चाहान्छु ।
शर्मिला मिस …
त्यो पुण्टे किन किन मलाई घोरी घोरी हेर्छ । क्लासमा अरु स्टुडेन्टको भन्दा उस्को नजर भिन्दै देख्छु । कहिले मेरा आँखामा त, कैले गर्दनको गोलाइमा त कैले छातीको मोटाइमा झुन्डिरहेको देख्छु । उफ ! त्यो नजरमा एकप्रकारको मनमोहकता । कक्षा दशको बिद्यार्थी होे । पढाइमा त्यति तेज छैन । तेज छ त सेक्सी नजरको अवलोकनमा त र स्पर्श गर्नमा शरीरको हरेक खण्ड खण्डमा । हिजो त मैले रिसाएझैँ गरी सोधेँ – ‘के हेरको त्यसरी ?’
‘केही होइन मिस, मलाई तपाई देख्यो कि हेरिरहन मन लाग्छ ।’
उस्को जवाफले मुण्टो बटारी चारैतिर हेरेँ । कोही थिएन र पो त सुरक्षित भएँ । सेक्स जानेका हुन या नजानेका । यद्यपि उस्को नजरले छोइएका मेरा अङ्गहरु समाजले संवेदनशील भनेकै अङ्गहरु हुन् । शिशु नजर त्यो लाग्छ मेरो दुधको मुण्टो खोजिरहेछ । उस्को नजरको चाल पाएर मेरा दुई स्तनहरु कछुवातुल्य डरले टाउका लुकाउँदा हुन् । तर, जस्तो सिरिङ्ग –सिरिङ्ग अनुभूति भए पनि त्यो नजरसँगै काउकुति पनि गाँसिएर आउँछ ।
छि ! कस्तो सपना देखेछु हिजो राति । त्यही पुण्टेसँग एउटा पसलमा आइसक्रिम पालैपालो खाइरहेको रहेछु । ‘मिस सवथोक सिकायो मलाई, अब जीवनको मुख्य पाठ सिकाइदेऊ न’ भन्दै मुसुमुसु हाँसिरहेको थियो । मैले कुन पाठ भनेर सोध्न नभ्याउँदै त्यो बामपुडके रमेश सरको रात्रीकालीन मिसकलमा व्युझिँएछु ।
एकक्षण पछि मिसकल गर्दा के जान्थ्यो पुड्केको ? एउटा भिलेन मिसकलले सपनाको पीरतिको आइसक्रिम नै पग्लायो । हिजो रातिदेखि त मलाई रमेश सरलाई डेढो आँखाले पनि हेर्न मन लाग्दैन ।
पुण्टेसित के सम्वन्ध हो मेरो ? अचेल किन पुण्टेले हेर्दा मलाई लाजको अनुभूति हुन्छ । पुण्टे एकदिन स्कुल आएन भने मलाई दिनभरि विरक्ती लाग्छ । कहीँ मेरो ऊसित प्रेम बसेको त होइन ? कहीँ आफ्नै स्टुडेन्टसँगको मेरो यो शारीरिक आकर्षण त होइन ? होइन भने सपनामा आइसक्रिम पनि त बाँडिन्थयो होला नि, किन एउटै आइसक्रिम पालैपालो खाइन्थ्यो । एउटा कुरा भनुँ कि नभनुँ ।
आइसक्रिम खाए पछि पुण्टेले भनेका थियो, ‘मिस तपाईको ओठमा आइसक्रिम बाँकी छ ।’ मैले भनेँ, पुछिदेऊ न त । उस्ले त्यस पछि केले पुछ्यो भनेर मलाई भन्न पनि लाज लाग्छ । एउटा यस्तो सेक्सी रुमालले पुछ्यो, आइसक्रिम थोरै, धेरै त ओठको लाली नै पुछयो कि जस्तो लाग्छ ।
पर्ख, त्यो पुण्टेलाई खल्तीबाट रुमाल झिक्न अल्छी मानेर ओठको दाग ओठैले पुछिदिनेलाई …। तर पनि मलाई यस्तै सपना प्रिय छ, त्यही आइसक्रिम र ओठमा त्यस्तै सेता सेता चिसा दागहरु र पुछियुन ती दागहरु केवल पुण्टेका सेक्सी रुमालले । म अपुरो त्यही सपनाको पर्खाइमा छु र आँखाभरि छ त्यही पुण्टे … ।